Siyaasadda iyo Dimuqraadiyadda - Geofumadas
Wararka Siyaasadda Caalamiga ah
Markii aan goobjoog ka ahaa riwaayaddii gargaarka bani'aadamnimo ee Venezuela, waxaan go'aansaday inaan ku soo gabagabeeyo warqad aanan dhammayn karin. Haddii aad akhrido daabacaadda, oo ku saabsan odyssey-kayga inaan ka tago Venezuela, hubaal waxaad xiiseyneysay inaad ogaato sida uu ku dhammaaday safarkayga. Dhibaatadii safarka ayaa sii socotay, waxaan u sheegay inaan kari karo ...
Ujeeddooyinka kale ee Xiisadda Siyaasadeed ee ka taagan Honduras
2009 wuxuu ahaa sanadkii uu qalalaasaha siyaasadeed ee Honduras ku qarxay qaabka cusub ee inqilaabyada, oo leh astaamaha afgembi qayb ahaan ah, oo leh qiil ku dhex jira xeerar ilaalinaya; in kasta oo la jebiyey mabaadi'dii ugu nadiifsanayd ee dimuqraadiyadda. Geofumadas hadda waxay dhaaftay 100,000 booqasho bille ah, laakiin ...
Laga soo bilaabo wareegyada Honduras iyo Paraguay
Marka hore, waxaan ku bilaabayaa inaan cadeeyo waxaan ugu yeeray afgambi maxaa yeelay bilo baaris kadib warbixintii Gudiga Runta ayaa ah magacii sida loogu yeeray kiiska Honduras waana magaca muranka caalamiga uu horseedi doono laba sano oo dhibaato ah dadka reer Paraguay. Waxyaabaha ay iska shabahaan ayaa ah ...
Latinobarómetro, warbixinta 2011
Waxaa jira Latin Ameerika oo ku qarsoon sawirka khayaaliga ah ee qarnigii labaatanaad, waanu bedelnay.In kasta oo daciifnimada siyaasadeed iyo kalsooni-darradu hafiyeen ajendaha gobolka, haddana horumarka si aamusnaan ah ayuu u socdaa iyada oo aan la fiirin. Sidaa darteed gobol cusub ayaa soo baxay oo riixaya inuu ka dhaqso badan yahay dalalka, si dib loogu qaybiyo midhaha ...
Kufsiyada iyo halisyada kale
Ka dib markii ay soo baxday warbixinta Gudiga Runta, waxaan awood u yeelanay inaan si faahfaahsan u aqrino markhaatiyada kuwii dhinac ama dhinaca kale ahaa ee ku saabsanaa dhibaatadii dimoqoraadiyada ee ka dhacday Honduras labadii sano ee la soo dhaafay. Warbixintu ma sheegeyso waxyaabo badan oo aanan ogeyn, gabagabada ugu weyni waa ...
gvSIG, Qabsashada Meelo Cusub ... Waa Loo Baahan Yahay! Muran?
Kani waa magaca loogu magac daray Shirka Toddobaad ee caalamiga ah ee 'gvSIG Conference' oo la qaban doono dhammaadka Noofambar 2011. Sannadkan diiradda la siinayo waxay siin doontaa waxyaabo badan oo looga hadlo meelaha gaarka ah ee softiweerka weyn ee geospatial; laakiin qaabkeedu waa lama huraan, haddii gvSIG laga filayo inuu gaaro ...
GvSIG, Leisure / waxyi, Politics iyo Dimuqraadiyadda
Dhibaatada Honduran waxay u muuqataa inay dhammaato
"Haddii aad dhaleyso iguanas, waan kori doonnaa iguanas," ayuu yiri. Laakiin magaaladan dhimashadu ka dib ma jiri doonto idinka daraaddood. (bogga 11) "Maxaad u malayn?" José Arcadio, si daacadnimo ah, wuxuu ugu jawaabay: -Dog shit (bogga 14) "Warqadaha uma dirno magaaladan," ayuu yiri isagoo aan xanaaqsan. Oo si aad mar uun u ogaatid, maya ...
Honduras: Dib ugu soo noqoshada dhibaatada, dagaalka sokeeye ayaa mar kale ikhtiyaar ah
Kama qorin mowduucan maalmo badan, laakiin dhacdooyinkii usbuucii la soo dhaafay iyo weydiimaha asxaabta wanaagsan ee daaqada ka fiiriya waxay ii tilmaameen inaan haysto wax aan idhaahdo ka dib markii warbaahinta caalamku sii daayeen xogo cusub. Marka waxaan ka faa'iideystaa "Café de Colinas" ...
... maalmo ma doonayo inaan dhaafo ...
Toddobaadka dhammaadkiisa, oo laga jaray digaagga Farmville, howlaha aan waligood dhammaan, laga bilaabo golayaasha loo baahan yahay in lagu dhejiyo derbiga ... In kasta oo xiisadda siyaasadeed, haddana dhammaanteen waxaan dooneynaa in dhadhanka xun uu aakhirka dhaafo. Ku dhowaad eey amaahday. Waxay umuuqataa mid la yiraahdo Fido, oo walaalkay u bixiyey eey ...
Post post 801
Qoraalkan waa inaan lagu lumin mawduuc aan micno lahayn, laakiin toddobaadku wuxuu noqon doonaa mid mashquul badan haddii aan doonayo inaan fasax ku aado nabad; marka waa inaan kahadlaa inta udhaxeysa khadadka. Deyn ahaan faallooyinka saaxiibkaa ee i weydiiyay haddii wiilkaygu sawiro Asterix iyo Obelix, halkan waxaa ku yaal tusaale laga soo qaatay mid ka mid ah ...
egeomates My, Politics iyo Dimuqraadiyadda
Dhibaatada ka taagan Honduras ... ayaa sii socota
Kuwa safraya, ee jooga halka ay joogaan, garoomada diyaaradaha waa la xiray, wiilkeygu wuu faraxsan yahay maxaa yeelay imtixaankiisa ma heli doono. Bandow in ka badan 24 saacadood ah, ma jiro ganacsi, shaqo la’aan, xal ma jiro. Inta soo hartay, waa sii socoshada isla sheeko taas oo xagjirnimadu ay aad u kala jajaban tahay maalin kasta ... ka dib ku dhowaad saddex bilood oo ka mid ah ...
Qiyaas ahaan 10 hal xuruuf ah oo ka mid ah dhibaatooyinka xayawaanka
… Kadib markaan gacantayda siiyay laba qanjaruufo, waxaan kudhamaaday aqbalid inaanan riyoon. Hon Hadday Honduras cambaareysay warqadda OAS oo si dhaqso leh u dhaqan galay, oo OAS ay ceyrisay Honduras, Zelaya hawada ma sii jiri doontaa? … Inta badan dadka reer Nicaragua iyo kuwa reer Venezuela ee jooga magaalooyinka; wax ay ku socdaan. ... qaar badh ayaa gaboobay, way ka hadleen ...
Honduras waxay dooratay kaalinta saddexaad
"Tan macnaheedu, waxaan kugula socodsiinayaa in aan cambaareynayo warqadda Ururka Mareykanka iyadoo la raacayo qodobbada qodobka 143, isla markaana si dhaqso leh wax ku ool u leh" Kaliya tan ayaa maqneyd, oo ay ahayd in loo furo qayb siyaasadda iyo sharciga caalamiga ah, maxaa yeelay dulucdu waxay socotaa muddo dheer. Shalay waxaan kahadlayay fursadaha suurtagalka ah ...
Honduras: siyaabo kale oo qalooc leh ama macquul ah
Maad ii qorin maalmo, ma waxay ka saareen internetka? Mise waa inaad dariiqyada joogtaa mise waa inaadan mar dambe i jeclaan? Adiga oo daacad ah: dharkaaga ilmada: blog-ka Honduras wuxuu ku soo laabtay fagaaraha adduunka, ka dib markii in yar laga yidhi qaybtan yar ee xujada ah ee lagu qasbay ...
6 maalmood oo nolosheena bedelay
Maalmihii la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo aad u kala duwan, midna kan kale. Mid walbaa wuxuu lahaa dhadhan ka duwan, waa ceeb in dhadhanka sidaas lagu kala qaybsamo, halka macaanku u rogo qaar, qaar kalena waxay u dhacaan si kale. Qof walba, dhadhanka asalka ah waa xammeeti, maadaama aanan ahayn fekeryahan mana aha tan ...